आईपीएलः दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध सर्वाधिक रन बनाउने ३ ब्याट्सम्यान
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध दिल्ली क्यापिटल्स (डीसी) हालसम्म इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को फाइनलमा समेत पुग्न सकेको छैन । आईपीएलको १२ वर्षे इतिहासमा दिल्लीले कैयौं स्टार खेलाडी टोलीमा भित्र्यायो । तर पनि टिमले कुनै पनि सिजनमा फाइनलसम्म स्थान बनाउन सकेन ।
प्रत्येक संस्करणमा खेलाडी परिवर्तन देख्न पाइए पनि विगतमा डीसीको प्रदर्शन सन्तोषजनक रहन सकेन । तर, आईपीएल २०१९ मा भने दिल्लीले राम्रो लय समातेको थियो । टिम केही सन्तुलित बनेसँगै गत संस्करणमा दिल्लीले नतिजा पनि सन्तोषजनक नै दिएको थियो । उसले आईपीएल २०१९ मा लामोसमयपछि सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो ।
गत सिजनमा तीव्र गतिका बलर कागिसो रबाडा र ईशान्त शर्माले दिल्लीलाई सेमिफाइनलमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । बलिङ पक्ष बलियो भएसँगै गत वर्ष दिल्लीले धेरै म्याचमा आफू अनुकूल नतिजा निकाल्न सफल भयो । विगत संस्करणहरूमा बलिङ लाइन कमजोर हुँदा टिमले अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न सकेको थिएन ।
गएका सिजनहरूमा कमजोर बलिङको फाइदा उठाउँदै विपक्षी टिमका ब्याट्सम्यानले दिल्लीविरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । यसैबीच आज आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध सर्वाधिक रन बनाउने ३ खेलाडीका बारेमा चर्चा चर्चा गर्दै छौँः
३. रोहित शर्माः २०११ मा मुम्बई इन्डियन्स प्रवेश गर्नुअघि डेक्कन चार्जर्सबाट खेलेका रोहित आईपीएलका सर्वाधिक सफल कप्तान हुन् । उनकै नेतृत्वमा मुम्बईले सर्वाधिक ४ पटक आईपीएलको उपाधि जितेको छ ।
रोहितले २०१३ को आईपीएल संस्करणदेखि हालसम्म मुम्बई टिमको कप्तानी सम्हालिरहेका छन् । शानदार आईपीएल करियर बनाएका उनले दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध २५ खेलमा ३३.८६ को औसतमा ७४५ रन बनाएका छन् । दिल्लीविरुद्ध उनको व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन ७४ रन हो । रोहितले दिल्लीविरुद्ध खेलेको २५ खेलमा ३३ छक्का र ६० चौका हिर्काएका छन् ।
२. आजिंक्य रहाणेः आसन्न आईपीएल सिजनका लागि दिल्ली क्यापिटल्समा जोडिएका रहाणे यो सूचीको दोस्रो स्थानमा आउँछन् । उनले विगतमा मुम्बई इन्डियन्स, राइजिङ सुपरजाइन्ट्स र राजस्थान रोयल्सबाट खेल्दै दिल्लीविरुद्ध १८ म्याचमा ७८४ रन बनाएका थिए । यस क्रममा उनको ‘स्ट्राइक रेट’ १३३.३३ रहेको थियो ।
१. विराट कोहलीः आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान विराटको नाममा छ । लामो समयदेखि रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी)को नेतृत्व गरिरहेका कोहलीले दिल्लीविरुद्ध २० म्याचमा ६३.२५ को औसतमा सर्वाधिक ८२५ रन बनाएका छन् । दिल्लीसँग खेलेको म्याचमा उनको व्यक्तिगत उच्च स्कोर ९९ रन हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १२, २०७६, १३:४२:००